မကြာခဏ အအေးမိခြင်းနှင့် တုပ်ကွေးဖြစ်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အားနည်းခြင်း စသဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်း စေပြီး ခွန်အားဖြည့်ပေးသည်။
၎င်းသည် တရုတ်ရိုးရာ ဆေးဖက်ဝင်များနှင့် အနှောက်တိုင်းဆေးဖက်ဝင်အပင် များမှ ထုတ်လုပ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ မကြာခဏ အအေးမိခြင်း၊ တုပ်ကွေးဖြစ်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနှာခြင်း၊ ညဘက်ချွေးထွက်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ ကြွက်သား ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်း၊ အစာစားလိုစိတ် လျော့နည်းခြင်း၊ ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်းနှင့် အားနည်းခြင်းများကို သက်သာပျောက်ကင်း စေပါသည်။ အနာသက်သာရုံမဟုတ်ဘဲ ဆုံးရှူံးသွားတဲ့ အားအင်ကို ပြန်ဖြည့်ပြီး ကိုယ်ခံအားမြှင့်တင်ပေးပါသည်။
အသုံးပြုပုံ - တနေ့ (၁)ကြိမ်မှ (၂)ကြိမ် (၂)လုံး သောက်သုံးပါ၊ (၆-၁၂)နှစ် (၁-၂)လုံး တနေ့ ၁/၂ကြိမ် သောက်သုံးပါ၊ (၂-၆)နှစ် တဝက်/(၁)လုံး သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ဆေးလုံး ကြေမွသွားအောင် ယိုရည် (သို့) ပြားရည်ဖြင့် ရောသမပေးရပါမည်။
At Fusion Health, we believe the ancient wisdom of Chinese medicine – with its emphasis on achieving and maintaining balance and harmony of the body, mind and spirit – can help you experience the health, vitality and wellbeing you’re looking for.
Established in Byron Bay in 1999, Fusion Health was born out of our co-founder Paul Keogh’s experience formulating Chinese and Western herbal extracts.
Paul consistently observed that incorporating Chinese herbal extracts into his formulas provided significantly greater therapeutic and health benefits than formulating with Western herbal extracts alone.
Inspired by these results and by the accumulated wisdom inherent inasystem of medicine that’s been practised for more than 2000 years, Paul became passionate about making the power of Chinese medicine more accessible to Australians and teamed up with natural health industry veteran Geoff Teasel to do so.
The unique range of natural health products they developed by integrating the ancient wisdom of Chinese herbalism and the scientific validation of modern medicine became Fusion Health, which was acquired by the Blackmores Group in 2016.
Today, Fusion Health is Australia’s leading provider of Chinese herbal medicines in health food stores, and co-founder Paul Keogh continues to playakey role in our new product development.